काम नगर्ने ठेकेदार, धुलो खाने विद्यार्थी (फोटो फिचर सहित) | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
काम नगर्ने ठेकेदार, धुलो खाने विद्यार्थी (फोटो फिचर सहित)
Published On : १० फाल्गुन २०७७, सोमबार १०:४२
गोरखा सदरमुकाम भएर ग्रामिण भेग जाने अस्पतालमार्ग–बराह–फिनाम सडक खण्डमा निर्माण ब्यवशायीको लापर्वाहीले पैदलयात्री ले सास्ती खेप्नु परेको छ । २०७७ भदौ २४ गते पक्की नाली सहित कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको बानियाँ निर्माण सेवाले सडक निर्माण ढिला गर्दा समस्या भएको हो । अत्याधिक धुलोका कारण उक्त सडक भएर दिनहुँ आउजाउ गर्ने सरस्वती मावि आहाले, वल्ड क्यापिटल लगायतका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले निकै सास्ती भोगेका छन् ।
निर्माण जिम्मा लिने कम्पनीले काम गर्दा अरुलाई बाधा नपर्ने, असर नहुने गरी धुलो मारेर काम गर्नुपर्छ । पानी बारम्बार राख्नुपर्छ । तर उक्त सडक खण्डमा पानी बोक्ने ट्याङ्कर नै देखिँदैन । सडक भएर यात्रा गर्नेहरु एउटा गाडी आएपछि टाढा दौडनुपर्ने, पर्खिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एक दिन लगाएको विद्यालय पोशाक अर्को दिन लगाउन नमिल्ने गरी धुलाम्य हुने गरेको भन्दै विद्यार्थीले बारम्बार शिक्षकहरु सँग गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
‘दिनदिनै विद्यालयबाट फोन आउँछ, अविभबकले पनि गुनासो गर्नुहुन्छ’ वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष कृष्ण केसीले भने ‘हामीले पूर्वाधार कार्यालयलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ, एक दिन पानी हालेको जस्तो गर्छन, फेरी उस्तै हुन्छ, नियमित पानी नहाल्दा समस्या भएको छ ।’ बिहान विद्यालय आउने र बेलुकी फर्कने समयमा र पैदल यात्रीले दिनभरी उक्त सडक भएर हिड्दा धुलो खान बाध्य छन् । सडक वरपर घर भएकाहरुले पनि गुनासो गर्ने गरेको वडा अध्यक्ष खत्रीले बताए । ‘निर्माण ब्यवशायीले हामीलाई टेरेनन’ उनले भने । गोरखा सदरमुकाम भएर आरुघाट, घ्याम्पेशाल, बुङ्कोट, बोर्लाङ, सोती, माछाखोला, ताकुकोट लगायत ठाउँमा सवारी साधन आउजाउ गर्छन । ग्रामिण भेगको मूख्य ब्यापारीक केन्द्र आरुघाट जाने उक्त सडक खण्डमा निरन्तर सवारी चलिरहन्छ ।
चार दशमलव ६ किलोमिटर सडक दुई वर्ष भित्र निर्माण सक्ने गरी ८ करोड ४७ लाखमा बानियाँ निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको हो । सडकमा अहिले काम गर्ने मान्छे खासै देखिँदैनन् । ‘कामको गती सन्तोष मान्ने खालको छैन’ पूर्वाधार बिकास कार्यालय गोरखाका इन्जिनियर गणेश सुवेदीले भने ‘हामीले पटक पटक निर्माण ब्यवशायीलाई काम छिटो गर्न भनेका छौँ ।’ सडकमा अत्याधिक धुलोका कारण पैदलयात्रीलाई सास्ती भएको गुनासो आइरहेको बताउँदै उनले निर्माण ब्यवशायीलाई आग्रह गरेको बताए ।
सडक निर्माणको कामले सन्तोषजनक गति लिन नसकेको बताउँदै उनले अहिले सम्म कबिर २० प्रतिशत काम भएको अनुमान गरे । दुई वर्ष भित्र निर्माण पुरा गर्ने सम्झौता गरेको कम्पनीले करिब एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिईसकेको पूर्वाधार बिकास कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर गौतम गुरुङले दैनिक दुई सय भन्दाबढि गाडी उक्त सडक खण्ड भएर ओहोर दोहोर गर्ने हुँदा पानी राख्दा पनि निरन्तर धुलो उड्ने गरेको बताए ।
‘हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार पानी राखेका छौँ, तर अझै पुगेको छैन’ उनले भने । कामदार थोरै हुँदा सडक निर्माणको कामले गती लिन नसकेको स्विकारर्दै केही दिनमा कामदार थप गर्ने उनले बताए ।